Madaxweyne Saalax oo sheegay in uusan xilka ka tanaasulayn xilli koonfurta Yemen ay weli ka socdaan qalalaaso – SBC
Madaxweyne Saalax oo sheegay in uusan xilka ka tanaasulayn xilli koonfurta Yemen ay weli ka socdaan qalalaaso
Riyadh:-Madaxweynaha dalka Yemen Cali C/della Saalax oo hadda lagu daweenayo dalka boqortooyada Sucuudiga ayaa sheegay in uusan xilka ka degi doonin ilaal inta si habsami ah uu xilka ku wareejinayo.
Mas’uul Yemeni ah oo ku booqday madaxweyne Saalax isbitaal ku yaala magaalada Riyadh ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in madaxweyne Saalax uu taageersan yahay qorshaha ku aadan waan waanta dowladaha Khaliijka ay garwadeenka ka yihiin ee lagu doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha ka sii socda dalka Yemen.
Mas’uulka oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in uu filayo in madaxweyne saalax uu doonayo in uu mas’uu ka noqdo howlaha kala guurka maamulka, islamarkaana in doorasho la sameeyo ay qaadan doonto muddo lix bilood ilamaa sideed bilood iyadoo cali c/della saalax uu sii ahaan doono madaxweynaha Yemen.
Madaxweyne saalax ayaa ka badbaaday isku day dil bishii la soo dhaafay waxaana loo qaaday dalka sucuudiga halkaasi oo laga daweenayo waxyeeladii ka soo gaartay weerarkii lagu qaaday qasrigiisa.
Dhanka kale gobolka Abyan ee koonfurta Yemen ayaa waxaa ka socda qalalaaso kadib markii la sheegay in kooxo la’aaminsan yahay in ay xiriir la leeyihiin ururka alqaacidda ay gacanta ku dhigeen labo degmo.
Sidoo kale dadka ku nool magaalada Cadan ee koonfurta Yemen , ee soo dhoweeyey kumaan kun oo barakacyaal ah ayaa ka cabsi qabta in qalalaasaha ka socda Abyan ee deriska la ah uu ku soo fido dhankeeda.